DAAWO: Malaha Waa Tan Suuragal ka Dhigeysa in Liverpool ay ku Guuleysato Koob Weyn xagaagan…Xilli Maxamed Saalax uu Sameeyay Arin Qiiro leh – Gool FM
DAAWO: Malaha Waa Tan Suuragal ka Dhigeysa in Liverpool ay ku Guuleysato Koob Weyn xagaagan…Xilli Maxamed Saalax uu Sameeyay Arin Qiiro leh
( Merseyside ) 21 Dis 2018. Liverpool ayay soo martay habeen weyn talaadadii lasoo dhaafay kullan ay ku cayaareen Anfield marka uu Mohamed Salah dhaliyay goolka guusha oo ay kaga adkaadeen Napoli kasoo ay ku gaareen wareega 16-ka koobka Champions League.
Sido kale habeenkaa wuxuu ahaa mid qaas u ahaa taagere kamid ahaa taagerayaasha ku sugnaa garoonka, waana Mike Kearney, kaa oo la arkayay isagoo u dabaal-dagaya goolka xilli uu garoonka ka taagnaa Kop End halka ina adeerkii Stephen Garcia uu ahaa mid u sheegayay iney gool dhaliyeen madaama uu yahay indhool ama qof araga la’.
Wuxuu ahaa waqti dareen leh iyadoo uu sameyn weyn Video ku yeeshay Baraha Bulshada waxayna muujineysa taageera kasta inuu dabaal-dag weyn sameynayo inta lagu guda jiro dheesha.
Kaddib marxaladan farxada leh labada wiil ayaa casuumaad ka helay Salah iyadoo Kearney iyo ina adeerkii ay booqdeen xarunta tababarka kooxda ee Melwood waxayna sido kale la kulmeen macalin Jurgen Klopp iyo qaar kamida xiddigaha naadiga.
Daawo waa markii uu dabaal-dagayay goolkii Saalax iyadoo ina adeerkii uu dhegta ugu sheegay iney gool dhaliyeen.
Waa Booqashadii Mike Kearney uu ku yimid Melwood.
Ramos oo ka hadlay wararka ku aadan in Mourinho uu tababare ka noqon doono kooxda Real Madrid
Maurizio Sarri oo ka jawaab celiyay wararka ku aadan in Higuaín uu ku biirayo kooxda Chelsea